बिहानै उठेर ऐना हेर्नु यति नराम्रो , किन ? – Suchana Hub
बिहानै उठेर ऐना हेर्नु यति नराम्रो , किन ?
काठमाण्डौ । बिहान कहिल्यै ढिलासम्‍म नसुत्नुस्। ब्रम्हमू्र्तको समयमा उठ्नुस्। सूर्य उदाउनु अगाडि उठ्नु स्वास्थ्यका लागि पनि अत्याधिक राम्रो मानिन्छ। धेरैजना व्यक्ति बिहान छिटै उठ्न रुचाउँदैनन् । त्यस मध्य पनि केही यस्ता हुन्छन् जो ओछ्यानबाट उठेर सोफा या अन्य कुनै ठाउँमा गएर सुत्ने गर्दछन् । यो बानी एकदमै नराम्रो बानी हो । यस्तो बानीले तपाईको निद्रा पुरा भएर पनि तपाईले फ्रेश अनुभव गर्न सक्नु हुन्न जसले गर्दा तपाई दिनभर सुस्त रहनुहुन्छ। भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।
बिहान उठ्ने बित्तिकै ऐना हेर्ने नगर्नु होला। यसले तपाइको शरीरमा धेरै मात्रामा नेगेटिभ ऊर्जा प्रदान गर्छ भने शरिरमा रोगको सम्भावना र भयको सम्भावना बढी उत्पन्‍न गराउँछ।
Previous बिहान उठ्नासाथ यस्तो स्त्री देख्नुभयो भने निकै शुभ…